Sarona ny volavolan'ny OnePlus 7, miaraka amina fahagagana amin'ny fakan-tsary | Androidsis
Naseho ny antsipiriany rehetra momba ny famolavolana OnePlus 7. Gaga anao ny fakantsarinao!
Tsy vao izao no nahitanay ny mety endrika OnePlus 7. Hatramin'izao dia nanantena modely iray misy rafitra fakan-tsary telo izahay, zavatra vaovao be ao amin'ny fitaovan'ny orinasa, saingy izao dia afaka manamafy izay ho endrik'ilay hain-tsarimihetsika manaraka ao amin'ny orinasa any Shenzhen izahay. Ary io dia, andiana fonosana efa navoaka izay manazava tsara hoe inona ilay Famolavolana OnePlus 7.
Eny, mbola mitete io, ka mety hosoka izy io, saingy misy antsipiriany marobe izay mahatonga antsika hieritreritra fa mijery ny volavolan'ny OnePlus 7. Hanombohana azy, ity maodely ity dia manana faran'izay tsara mitovy amin'ny OPPO F11 Pro, zavatra mahazatra indrindra amin'ny marika, satria ny mpanamboatra azy dia ao anatin'ny kaontenera iray ihany. Raha ampiantsika amin'io ny kalitaon'ireo sary, izay mifanitsy amin'ny fonony ofisialy, dia hazavain'izy ireo mazava tsara fa io no ho endrik'ilay maodely andrasana.
1 Fantson'ny efijery rehetra, tsy misy marika ... na jack 3.5 mm
2 Antsipiriany misimisy momba ny mety ho fampiasa amin'ny OnePlus 7
Fantson'ny efijery rehetra, tsy misy marika ... na jack 3.5 mm
Araka ny hitanao amin'ireo sary samihafa miaraka amin'ilay lahatsoratra, dia mahita antsipiriany mahaliana maro momba ny famolavolana ny OnePlus 7. Hanombohana, eo an-tampony no ahitantsika sensor izay, azo inoana, fa hanao ny asan'ny infrared, mba hahafahantsika mampiasa ny telefaona toy ny hoe fanaraha-maso lavitra.
Izany dia tsy maintsy ampiana ny fisokafan'ny mahaliana hita any amin'io faritra io ihany. Eto no misy ny Fakan-tsary voalohany OnePlus 7. Eny, ny telefaona dia miloka amin'ny vahaolana azo esorina mba hisorohana ny fihenan'ny fanapahana ny estetika amin'ny efijery. Drafitra mampidi-doza izay, farafaharatsiny mba manao fahasamihafana raha oharina amin'ireo mpifaninana aminy. Eo amin'ny sisin'ny terminal dia mahita fiovana vaovao vitsivitsy isika: ny bokotra on sy ny off ny telefaona, ny fanalahidy fanaraha-maso ny volume ary ny bokotra iray hafa natokana izay ahafahantsika manamboatra mba hanokatra ny rindranasa izay tadiavinay indrindra.
Mifindra mankany amin'ny farany ambany, dia eo no hisy ny seranan-tseranana USB Type-C finday, ary koa ny mpandahateny OnePlus 7 sy ny slot amin'ny karatra nanoSIM. Ny tsy nampoizina? Tsy misy output audio 3.5mm ihany koa. Fahadisoam-panantenana lehibe tokoa. Na dia tsy zavatra tsy nantenainay aza izany. Ary tsy afaka manadino ny tapany aoriana isika, madio tanteraka, ary ny zava-baovao vaovaon'izy ireo dia ny fananana rafitra fakantsary telo miaraka amin'ny flash LED. Toa ny mpanamboatra no miloka mafy amin'ny fizarana sary.
Ary ahoana ny eo aloha? Eto isika dia mahita fivoarana hafa tena mahaliana. Ho an'ireo vao manomboka, ny maodely dia tsy manana karazana faharatsiana eo amin'ny efijery, noho izany dia tsy tapaka ny estetika ary manome ny finday efijery lehibe kokoa ho an'ny fitaovana ilay fitaovana. Ny ankamaroan'io fahamendrehana io dia mandeha amin'ny tsy fahampian'ny frame rehetra amin'ny sisiny, zahana ambany kely fotsiny no hitantsika. Ho fanampin'izay, ahoana no mety hitranga raha tsy izany, ny famolavolana ny OnePlus 7 dia hampiditra mpamaky rantsan-tànana tafiditra ao amin'ny efijen'ilay fitaovana, iray tena ilaina amin'ny telefaona te-ho tonga anisan'ny faritra avo indrindra amin'ny sehatra.
Antsipiriany misimisy momba ny mety ho fampiasa amin'ny OnePlus 7
Raha ny momba ny fitaovana izay hapetaka amin'ity terminal ity dia hanomboka hiresaka momba ny efijery OnePlus 7 izahay, noforonin'ny tontonana AMOLED misy diagonal 6.4-inch sy vahaolana Full HD +. Amin'izany, tsy maintsy ampidirintsika amin'ny satro-boninahitr'i Qualcomm, ny mpikirakira Snapdragon 855 miaraka amina Adreno 640 GPU ary 8 GB RAM, ankoatry ny fanaingoana fahatsiarovana ao anatiny izay hanomboka 128 ka hatramin'ny 512 GB.
Ny fakan-tsary any aoriana dia ho vita amin'ny rafi-maso misy triple miaraka amina sensor 48-megapixel voalohany, ny zoro 20-megapixel ary ny fantsom-telefaona 5-megapixel, tsy hadinonay ny fakantsary azo esorina aloha izay hanana vahaolana 16-megapixel. Mba hamaranana ireo fitaovana mety hananan'ny OnePlus 7 dia lazao fa azo inoana fa ho tonga amin'ny Android 9 Pie eo ambanin'ny sosona OxygenOS mahazatra an'ny mpanamboatra izy io, ankoatry ny fananana bateria 4.000 XNUMX mAh mammoth miaraka amina fiampangana haingana izay tompon'andraikitra amin'ny fanohanana ny rehetra ny lanjan'ireo fitaovana entin'ity mpamono sainam-pirenena ho avy ity. Ary aminao, inona no hevitrao Famolavolana OnePlus 7?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » OnePlus » Naseho ny antsipiriany rehetra momba ny famolavolana OnePlus 7. Gaga anao ny fakantsarinao!
Manomboka tonga amin'ny Google Assistant ny feon'ny olo-malaza